Mampahafantatra ny asany tao Fianarantsoa ny « notaire » eto Madagasikara ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mpiraki-teny mpanato soratra
Mampahafantatra ny asany tao Fianarantsoa ny « notaire » eto Madagasikara !
Cousin Dox il y a 2 mois
Nanao lahadinika fampahafantarana ny asany ny « notaire » (mpiraki-teny mpanato soratra) eto Madagasikara. Nisantarana izany ny teto Fianarantsoa izay natao tao amin’ny Hotely Tombontsoa Isaha ny alarobia 3 marsa 2021 teo ity. Hanaovana ity lahadinika ity ihany koa ireo mpianatry ny an-jery manontolo. Fifampizarana.
Vitsy mpahalala ny tena asan’ny notaire izany eto Madagasikara. Mazàna aza dia afangaron’ny olona amin’ny asa hafa eo anivon’ny fitsarana izy io. Ohatra ny asan’ny vadin-tany (huissier de justice). Niompana tamin’ny lohahevitra hoe : « ny asan’ny notaire eo anivon’ny orinasa » ny lahadinika izay notarihin'i Maitre Rija Razanadrakoto, filoha nasionalin'ny notaire. Miara-miasa amin'ny ministeran'ny fitsarana moa izy ireo amin'izany mba hanalefahana ireo olana hita eny anivon’ny fitsarana ka zary olana goavana eny anivon’ny fiarahamonina. Ireo mpandraharaha mitantana orinasa sy ny tompon'andraiki-panjakana eto Fianarantsoa no nasaina tamin'ity lahadinika ity. Nambaran'i Maitre Rija Razanadrakoto fa « ny hosoka amin'ny kara-panondro no tena maro amin'ny hosoka momba ny fanamarinam-pandovana sy ny fijoroana vavolombelona sandoka. Ary misy ihany koa amin’ny fananan-tany, eny fa amin’ny antotan-taratasy samihafa aza. Ny 80%n’ireo olana eny anivon’ny fitsarana dia ny ady tany. Mba hiarovana ireo hosoka samihafa amin’ny zo fototra fanamarinam-pandovana sy didim-pananana ireny dia manentana ny olona hanatona ny notaire, na dia hanontany ny mombamomba izany fotsiny aza satria tsy misy sarany izany.» Voafaritry ny lalàna mihitsy moa ny fifanarahana momba ny fandovana na fifanolorana fananana ka tsy maintsy ny notaire no hatonina amin'ny fikirakirana sy fanamarinana izany. Ny lalàna faha 81 mifehy ny fifampivarotana manodidina ny 15 tapitrisa ariary no tsy maintsy atao eny amin’izy ireo. Araka ny nambaran’ity filoha nasionalin’ny notaire ity hatrany dia « hita fa miroborobo ny toekarena ary maro ireo mpandraharaha no mirona aty Fianarantsoa. » Mba hanatsarana ny asan’izy ireo dia nisy ny volavolan-dalàna naroson’izy ireo ny mpitondra fanjakana ambony eto Madagasikara mba ho laniana eny anivon’ny antenimiera roa tonta. Mba hisorohana ilay didim-pananana tsy fantatr’ilay mpandova moa no ilàna ametrahana ilay « fichier central de dernière disposition des testataires » (fitahirizana ny didim-pananana rehetra voarain’ny notaire eto Madagasikara.) Faharoa manaraka izany ilay volavolan-dalàna momba ny tokony hanaovana « soratra an-tsisiny » eo amin’ny taratasy filazam-pahafatesana ataon’ny mpandova mba ho afaka manohitra avy hatrany ireo mpiara-mandova raha misy manao hosoka izany.
Mbola vitsy ireo notaire na dia efa ahitana azy avokoa ireo faritany enina.72 izy ireo eto Madagasikara ary hisy ny fandraisana mpiana-draharaha 25 ato ho ato.
Marihina fa ireo mpirakidraharahan'ny fitsarana (greffier en chef) sy/na ny délegué d'arrondissement irery no misahana ny andraikitry ny notaire ho an'ireo toerana tsy misy izany. Ankoatry ny lahadinika moa dia nisy ny fampahafantarana ny asan’ireo tamin’ny alalan’ny haino aman-jery eto an-toerana.